အချက်ပြလမ်းကြောင်းသုည Leetcode ဖြေရှင်းချက် - TutorialCup
ပင်မစာမျက်နှာ » LeetCode Solutions » စက်ရုံ Trailing သုည Leetcode ဖြေရှင်းချက်
စက်ရုံ Trailing သုည Leetcode ဖြေရှင်းချက်
ချဉ်းကပ်မှု ၁ (၅ ၏ရေတွက်သည့်အချက်များ)
စက်ရုံ Trailing သုည Leetcode ဖြေရှင်းချက်များအတွက်အကောင်အထည်ဖော်မှု
စက်ရုံ Trail သုည Leetcode ဖြေရှင်းချက်များအတွက်ရှုပ်ထွေးအားသုံးသပ်ခြင်း
ချဉ်းကပ်နည်း ၂ (၅ ခု၏တွက်ချက်မှုအချက်များ)
ဤပြproblemနာတွင် n တွင်မည်သည့်လမ်းကြောင်းမှသုညမည်မျှရှိသည်ကိုရှာဖွေရမည်။
input ကိုအဖြစ် n ပေးထားသည်။
လိုပဲတစ်ခုမှာနောက်ကွယ်မှသုည5ရှိ!
ငါး! =5*5*4*3*2= 1
ရှင်းလင်းချက် - ၃ ။ = 3, အဘယ်သူမျှမနောက်ကွယ်မှသုည
ရှင်းလင်းချက် - ၃ ။ = 0, အဘယ်သူမျှမနောက်ကွယ်မှသုည
n ၏တွယ်ကပ်နေသောသုညကိုရှာရန်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းလမ်းက n ကိုတွက်တာပါပဲ။ နှင့်အဆုံးမှာသုညမည်မျှစစ်ဆေးပါ။ ကိန်းကို ၁၀ နဲ့စားရင် ၁၀ ကျန်မယ်၊ ကျန်သုညကို ၁၀ နဲ့စားရင် ၁၀ နဲ့စားရင်ရမယ်။ ရတယ်။ ကျန်ချိန်ကိုသုညနဲ့ညီရင်ရမယ်။
သို့သော် n သည်ကျွန်ုပ်တို့သိသောကြောင့်၊ ဤချဉ်းကပ်မှုသည်ရိုးရှင်းသောကိန်းဂဏန်းများနှင့်လက်တွေ့မကျပါ။ အလွန်ကြီးမားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ C ++ နှင့် Java တို့တွင် integer အရွယ်အစားသည်အကောင်းဆုံး 64-bit ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကိန်းဂဏန်းများကို2^ 63 - 1 အကန့်အသတ်သာသိုလှောင်နိုင်သည်။ ၁၀ - ၁၈ နှင့်အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ java တွင် n ကဲ့သို့ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုသိမ်းဆည်းရန် BigInteger အတန်းကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်ဤ brute force ချဉ်းကပ်မှုသည်အချိန်နှင့်နေရာရှုပ်ထွေးမှုများစွာရှိသည်။
ဤနေရာတွင် n ၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသောသုညများကိုရှာဖွေရန်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ကိုဆွေးနွေးပါမည်။
ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကစုစုပေါင်း 10 သုညဟာဒီကိန်းရဲ့ဆခွဲကိန်းနဲ့ညီမယ်။ ပြီးတော့ ၁၀ ခုတိုင်းကိုနှစ်ဂဏန်း ၂ နဲ့ ၅ တို့ကထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။
ဒီတော့2ရဲ့မြှောက်ဖော်ကိန်းဘယ်လောက်ရှိသလဲသိရင်။ အလားတူပင်5၏အချက်များမည်မျှရှိသည်။ ပြီးတော့ဒီဟာတွေဟာတစ်ခုချင်းစီကို product 10 နဲ့ညီအောင်ပေါင်းစပ်နိုင်မယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်သုညတွဲစုစုပေါင်းအရေအတွက်သည်အနိမ့်ဆုံးနှင့်ညီသည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်များကို n တွင်ထည့်တွက်ရမည်။
n! = 1 *2*3... .. * (--1) * n
ဒီတော့2ကနေ n အထိကိန်းနှစ်ခုလုံးကိုထပ်ပြီးလုပ်မယ် (သူတို့ကအနည်းဆုံး ၂ လုံးပါတဲ့ကိန်းတွေဆိုတော့2ကိုတိုးသွားတယ်) ။
နံပါတ်တစ်ခုစီအတွက် ၂ ကိုထပ်ကိန်းကထပ်ကိန်း ၂ နဲ့စားရင် ၂ ရဲ့ရေတွက်ခြင်းကိုရှာမယ်။
အလားတူပဲအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းမှာရှိတဲ့5ကိုရေတွက်ရင်လည်းအတူတူပဲလုပ်ပါမယ်။
ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကိုနည်းနည်းလောက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ 1 ကနေ n အထိကိန်းဂဏန်းတွေရှိတယ်ဆိုတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလို့ရတယ်။ ဒါဆို ၂ ရဲ့စွမ်းအားက ၅ ထက်ပိုပြီးရတယ်။
4 မတိုင်ခင်က2မှာ2က4အရိန်းနှစ်ခုရတယ်။ ၅ မှာပထမကိန်းကိန်းအဖြစ်ကိန်း ၅ ရမယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအစဉ်အဆက် (တိုးပွားလာ) အရေအတွက်ကွာခြားချက်နှင့်အတူပေါ်သွားလိမ့်မယ် ဤတွင်5အချက်နှင့်5အချက်များအကြားရှိသိပ်သည်းဆကွဲပြားပုံကိုပြသသည့်သရုပ်ဖော်ပုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်2၏ရေတွက်သည် n အရေအတွက်5ထက် ပို၍ ကြီးသည်ဟုကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
ဒါဆို ၅ ခုရဲ့အရေအတွက်ကိုရှာဖို့လိုတယ်၊ အဲဒါကပေးလိမ့်မယ်။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တာဝန်ကိုထက်ဝက်လျှော့ချနိုင်သည်။
အို ()) ကျွန်တော်တို့ကမြှောက်လဒ်ငါးခုလုံးကို n အထိမေ့သွားတယ်။ ကျနော်တို့ log (n) အချိန်ယူပြီးဒြပ်စင်အသီးအသီးအဘို့အပုံငါးခု၏အရေအတွက်ကိုရှာဖွေကြည့်ရှုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးခဲ့သောနံပါတ်များအများစုတွင်တစ်ခုတည်းသောအချက်ငါးခုသာရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အို (၁) သို့ amortizes ။ ထို့ကြောင့်စုစုပေါင်းအချိန်ရှုပ်ထွေးမှုသည်အို ()) အဖြစ်ကျန်ရှိသည်။
အို (၁) မည်သည့်အပိုမှတ်ဉာဏ်မသုံးပါ။
အထက်ပါချဉ်းကပ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၅ ၏နံပါတ်ကိုပေးထားသော n ၏အချက်အဖြစ်ရှာရန်လိုအပ်သည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ အထက်ပါချဉ်းကပ်နည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်5၏မြှောက်ခြင်းများအားလုံးကို ဖြတ်၍ နံပါတ်တစ်ခုစီအတွက် ၅ ခုပေါင်းထည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးကို linear အချိန်တွင်ရရှိခဲ့သည်။ logarithmic time အတွက် ans တွေကိုတွက်ချက်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးလေ့လာမှုတစ်ခုလုပ်ပါမယ်။
တည်းခိုခန်း! (ဆိုလိုသည်မှာ ၁ မှ n သို့) ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၅ နှင့်စားလို့မရသောကိန်းဂဏန်းများရှိသည်။ (၅ အတွက်ရေတွက်ရာတွင်သုညထည့်သည်)၊ ၅ တွင်ပိုင်းခြားနိုင်သည့်နံပါတ်များရှိသည်။ ၂၅ (ဒီတစ်ကြိမ်တွင်များစွာသောကိန်းဂဏန်းတစ်ခုအပိုထပ်ဆောင်းထည့်ဝင်မှု)၊ ထို့နောက် ၁၂၅ ဖြင့်ခွဲဝေနိုင်သည်။
ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့၏ ans သည်ဤအရာအားလုံး၏ပေါင်းလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
5 ရဲ့ = n /5+ / / 25 + ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်က n / 125 + ။ စသည်
ပိုင်းခြေကို5နဲ့စတင်ပါ။
ပြေးပါ ကွင်းဆက်, ကြားမှာတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ရလဒ်မှ n / ပိုင်းခြေတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ပိုင်းခြေ 5. အားမြှောက်ပါက loop ကိုပိုင်းခြေမရောက်မှီတိုင်အောင် <n ။
အို (မှတ်တမ်း ())) ငါတို့ကပိုင်းခြေကို n ထက်ငယ်တဲ့အထိ5နဲ့မြှောက်လိုက်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကြားဖြတ်စုစုပေါင်းအရေအတွက်သည်မှတ်တမ်း (n) ဖြစ်လိမ့်မည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား LeetCode Solutions Tags: ဘလွန်းဘာ့ဂ်, လွယ်ကူသော, သင်္ချာ post navigation
Array နှစ်ခုကြားရှိအကွာအဝေးတန်ဖိုးကိုရှာပါ Leetcode Solution
မြို့တရားသူကြီး Leetcode ဖြေရှင်းချက်ကိုရှာပါ